Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Pejy 2 amin_ny 418
Tantara mikasika ny Kolontsaina
"Sady hadalana no loza aman-tany ary mamela banga goavana eo amin'ny tontolon'ny mozika Jamaikana ny famonoana an'i Tabby."
Nampitandremana ireo HongKongers mba tsy hitsapa ny lalàna sy ny fahavononan'ny manampahefana amin'ny fampiharana ny lalàna.
Tiorkia 06 Jona 2022
Andianà fandraràna fampisehoana miteraka adihevitra ao Tiorkia mampirongatra fanakianana ny antoko eo amin'ny fitondrana Rariny sy Fampandrosoana (AK) noho ny fametrahana fameperana zary tarazo mihatra amin'ny olom-pirenena sy ny zavakanto.
Afrika Mainty 03 Jona 2022
Taorian'ny fironana maneran-tany, tsy nitsahatra nijotso ny fivarotana kapila mangilatra (CD) noho ny fizoran'ny mpankafy hira any amin'ny fitrohana ankihy.
Amerika Latina 23 Mey 2022
"Azonao ampifamenoina amin'ny alàlan'ny fakàna sary ny siansa sy ny fiarovana."